A na-ekwupụta ọkwa HTC Desire 20 + na Snapdragon 720G na nnwere onwe ụbọchị niile | Gam akporosis
HTC bụ afọ ole na ole gara aga bụ otu n'ime ndị nrụpụta kachasị mkpa nke panorama nke telephony, mana oge na-aga, ọ na-efu ọtụtụ ala. Ndị Taiwan chọrọ iji nwayọọ nwayọọ webata ọdụ ọhụụ emere maka ndị ọrụ dị n'etiti na ndị niile nwere ọnụahịa dị ọnụ ala.
Firmlọ ọrụ ahụ ekwupụtala HTC Ọchịchọ ọhụrụ 20 +, a midranger nwere nnukwu ihuenyo, ihe nhazi nke na-emezu atụmanya, na batrị ga-adịgide ụbọchị niile na-enweghị akwụ ụgwọ. Companylọ ọrụ dị na nke a na-ahọrọ imewe nke ọma wee bupụta ya ma ọ dịkarịa ala agba abụọ mbụ.
0.1 HTC Ọchịchọ 20+, niile banyere ọhụrụ ọnụ
HTC Ọchịchọ 20+, niile banyere ọhụrụ ọnụ
El HTC Ọchịchọ 20 + na-emejuputa ihuenyo 6,5-inch, bụ ụkpụrụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji, na nke a mkpebi ahụ ka dị na HD + ma Gorilla Glass ga-echebe ya. Igwefoto dị n'ihu bụ megapixels 16, ọ dị mkpa iji foto kachasị mma selfies, vidiyo na Full HD + na nzukọ vidiyo dị elu.
Bụrụ ịhọrọ bụ Snapdragon 720G processor, ọsọ ọsọ kachasị bụ 2,3 GHz, ya na Adreno 618 eserese eserese dị mma maka arụmọrụ egwuregwu dị mma, 6 GB nke RAM na 128 GB nchekwa. Batrị ahụ gụnyere 5.000 mAh na-ebu ọnụ ngwa ngwa site na USB-C.
Na azụ bụ ngụkọta nke igwefoto anọ gụnyere, ihe kachasị dị na nke a bụ 48pipixels f / 1.7, oghere nke abụọ bụ 5 megapixel wide angle, nke atọ bụ nnukwu megapixel 2 na nke anọ bụ 5 megapixel bokeh. Usoro a bu gam akporo 10, ya na ntinye 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth, NFC, GPS na minijack.
HTC chọrọ 20+
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi / ozodimgba iko
Nhazi 720 na 8 GHz 2.3-isi Snapdragon 1.7G
Kaadị ahụ: Adreno 618
Gbanwee CAMERA Quad nwere ihe mmetụta 48 MP isi + 5 MP Wide Angle Unit + 2 MP Macro + 5 MP bokeh sensor
UMUAKA 5.000 mAh na ụgwọ ngwa ngwa (Ndenye Nchaji 4.0)
Njikọ 4G / Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / GPS / USB-C / NFC / MiniJack
El HTC Desire 20 + bịarutere na Taiwan na mbido, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ otú ụlọ ọrụ ahụ si maa ọkwa ya, a pụrụ ịzụta ihe nlereanya a ugbu a na agba abụọ: Black na oroma grajentị. Ọnụ ego ekwentị ọhụrụ a bụ 8.490 dollar Taiwan, nke ọnụego mgbanwe ya bụ euro 290.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A na-ekwupụta HTC Desire 20 + na Snapdragon 720G na obodo kwụụrụ onwe ya ụbọchị niile
YouTube Studio ruru 100 nde nbudata